स्वास्थ्य / जीवनशैली Archives - Korona Khabar
भैरहवा: पछिल्लो समयमा भारतमा फैलिएको कोरोना संक्रमणको जोखिम न्युनीकरण गर्नका लागि मुख्य सीमानाकामध्येको भैरहवा–सुनौलीमा सजगता अपनाउन थालिएको छ । सीमानाकामा कोरोनासंगै मलेरिया समेतको संक्रमणबाट जोगिन मंगलबारदेखि विशेष सावधानी अपनाउन थालिएको हो । ...
काठमाडौं । सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने दम्पत्तीलाई कोरोना संक्रमण भएको छ । लामिछानेले पीसीआर परीक्षण गर्दा आफू र पत्नी निकीता दुवैलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको जानकारी दिएका हुन् । उनले सामाजिक सञ्चालमार्फत कोरोना देखिएको जानकारी दिँदै आफूहरु दुवैको स्व...
काठमाडौं । सन् २०२० को चिकित्सा विज्ञानतर्फको नोबेल पुरस्कार तीन जना वैज्ञानिकलाई दिइने भएको छ । सोमबार एक कार्यक्रमका बीच स्विडिस एकेडेमी चिकित्सातर्फको नोबेल पुरस्कार विजेता घोषणा गरेको हो । यस वर्षको चिकित्सातर्फको नोबेल पुरस्कार ‘हेपाटाइटिस सी’ ...
बुटवल, १३ असोज कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को संक्रमणको त्रासको कारण सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिने सेवाग्राहीको संख्या गतवर्षको तुलनामा २६ प्रतिशतले घटेको छ । केन्द्रमा सेवाग्राही घटेपछि प्रदेश ५ मा रहेका सरोकारवाला सेवाप्रदायकहरु टोलफ्रि र घरदैलो कार्यक्र...
काठमाडौं । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले सत्याग्रही डाक्टर गोविन्द केसीसँग शीघ्र संवाद गरी सहमति खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । आइतबार (आज) समाजले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो । ‘एक निष्ठावान् सत्याग्रहीप्रति सम्मान प्रकट गर्दै संवाद...
काठमाडौं - १६ वर्ष उमेर समूहका किशोरकिशोरीमा सबैभन्दा बढी मानसिक समस्या देखिएको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले गरेको राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणले १६ वर्ष उमेरका ७.७ प्रतिशत किशोरकिशोरी बढी मानसिक समस्यामा पर्ने ग...
डा. गोविन्द केसीलाई शिक्षण जान अवरोध, जबरजस्ती नियन्त्रणमा लिएर ट्रमा सेन्टर पुर्‍यायो
काठमाडौँ । जुम्लाबाट आफ्नो १९औं सत्याग्रह थालेका डा. गोविन्द केसी काठमाडौँ आएका छन् । काठमाडौँ आएपनि डा. केसीलाई शिक्षण अस्पताल जान भने प्रशासनले अवरोध गरेको छ । बुद्ध एयरको नियमित उडानबाट काठमाडौँ आइपुगेका डा. केसीलाई प्रशासनले ट्रमा सेन्टरमा पुर्य...
डब्ल्युएचओले भन्यो- ‘कोरोनाले गम्भीर स्थिति निम्तिने खतरा झन् बढ्यो’
काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)का क्षेत्रीय निर्देशकले पछिल्ला केही दिनदेखि युरोपमा कोरोना भाइरसको संक्रमणको आँकडा हेरेर यसमा निकै गम्भीर हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । हान्स क्लूगले पछिल्लो दुई हप्तामा युरोपका सदस्य देशमा कोरोनाको...
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिहरुको नमुना झिकेर कोरोना परीक्षण नगर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले मृत्यु भएका व्यक्तिको कोरोना परीक्षण नगर्न निर्देशन दिएका हुन् । ‘मृत्यु भएका व्यक...
बुटवल, २७ भदौ नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाज रुपन्देही शाखाले भदौ महिनाको अन्तिम शनिबार गरेको रक्तदानसंगै ९० औ महिनाको नियमित रक्तदान सम्पन्न गरेको छ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी रक्त संचार केन्द्र बुटवलको प्राविधिक सहयोग तथा एक्सपर्ट एजुकेसन एण्ड भिसा सर...